Lapabe Tia Maro
"Tsy hiamboho adidy aho ..."
MANDRY VE NY AO AN-TANàNA Ô? MIFOHAZA ...
(Lapabe tia maro, Alahady 30 jolay2018)
Tsy mitsara mialoha an'izay ho lany ho filohampirenena eo zahay. Fa fantatra kosa ny niseho isaky ny vita ny fifidianana:
Atao anjorom-bala tanteraka ny vahoaka nifidy fa vita ny nilàna azy: - Tsy misy fampahafantarana ny besinimaro amin’ny fanatanterahan'ny mpitondra ny tetikasa fampandrosoana: hoatrinona ny vola natokana ho an'io, rahoviana no tokony ho vita ... - Tsy mba raharaha ikambanana ny tetikasa fa konokononin'ny fitondrapanjakana irery ao na ny fandinihana ny tetikasa hatao, na ny famolavolana izany, na ny fanatanterahana azy.
Dia mazava fa teraka ho azy ny kolikoly, ny risoriso, ny tsolotra, ny kiantranantrano, ny halatra satria tsy misy mangarahara fa ao anatin'ny aizina tanteraka, lavitry ny mason'ny vahoaka.
Tsy hijanona ho azy ireo fomba fanao ratsy navela hihanaka nandritry izay 58 taona ireo izay raha tsy dieny izao isika dia miteny avy hatrany hoe : « andao isika hiaraka hanorina … hanavotra ...na dia votsavotsa aza … fa miandàlana …atao dian-tanalahy ».
Tsy misy olona hanolotra antsika ny vahaolana tonga lafatra raha mijanona fotsiny ho tsara fanahy sy manantsaina mandinika sy mitsikera fotsiny eto isika mianakavy. Mila misikiponitra isika ka miasa avy hatrany na dia mbola tsy feno aza ny antoka rehetra.
Ny rehetra mihitsy no mila miara-misalahy eo amin’ny toerana misy azy, amin’izay maharesy lahatra azy, manatobaka ny hery sy ny saina fa tsy miandry ireo mpanao politika.
Indreto ary ny asa miandry ny tsirairay avy :
1. HO AN’NY ISAMBATAN’OLONA : Fanarahana ny fahamarinana sy fahamasinan’ny mpitondra
Fampakarana any amin’ny HCDDED ny tsy mety hitanao raha niditra birao-panjakana ianao (kolikoly sns) araka ny artikla faha-13 ao amin’ny didy hitsivolana laharana 2015-01.
Mahazo matoky ianao fa ny HCDDED dia tsy maintsy mampiakatra (mampahafantatra na mitory) ny raharaha.
Tsy misy tokony hampiahiahy anao satria araky ny artikla faha-16 dia tsy misy fanamarihana azahoana mahafantatra anao (protection des sources).
2. HO AN’NY ISAMBATAN’OLONA OMBAN’NY FIARAHAMONIM-PIRENENA : Fivondronana ao anatin’ny fikambanana hiaro ny demokrasia sy ny tany tan-dalàna (andrimaso)
Tsy anavahana antoko, na fivavahana, na firazanana, na fiaviana io fa dia tompon-draharaha avokoa ny rehetra amin’ny toerana rehetra. Io no rafitra hanofanana sy hampianarana ny vahoaka, hanomezana azy ny fiadiana hiadiany amin’ny lainga, ny kobaka am-bava, ny fanafenana ny zavamisy ataon’ny manampahefana. Izany no hahafahan‘ny vahoaka hirotsaka amin’ny fandraisana anjara mivantana amin’ny fiainam-pirenena mba:
hanebahana ny tsy fandraisana andraikitry ny manam-pahefana,
hanakianana ny fitarazohana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra,
ny famakiana bantsilana ny ronono antavy sy ny kobaka am-bava ka tsy ho lasa fitaovana sy tohatra fiakarana toy ny teo aloha intsony
hampahafantarana ny vahoaka amin'ny antsipiriany ny zavamisy marina amin'ny fanatanterahan'ny manampahefana ny asany.
3. HO AN’NY HCDDED(*) : Fampielezankevitra nasionaly amin’ny haino aman-jery, tambazotra sosialy, fidinana ifotony ho fampahafantarana
ny fahefana ananany azahoany manampy ny vahoaka amin’ireo andraikitra voatanisa etsy ambony
ny fomba haingana sy mahomby hampiakaran’ny vahoaka any aminy ny zavatra tsy mety ataon’ny manampahefana
ny fiarovana ananany tsy ho tratry ny valifatin’ny manampahefana notoriana
ny antoka fa tsy maintsy misy tohiny ny fitarainany : fampakarana amin’ny tomponandraikitra ambony na fitoriana
4. HO AN’NY VATO NASONDROTRY NY TANY
Manangana tambazotra hifanakalozana traikefa sy hifampitàna vaovao ho enti-manampy sy manohana ny fokonolona, ny Andrimaso, ny fiarahamonimpirenena.
Ilàna koa io mba handraisana ny fanakianana hanatsara zavatra
Fandrafesana ny asa vita
Ny tatitra ampahibemaso tsy maintsy hataon’ny HCDDED (artikla 23) amin’ny fotoam-pivoriana voalohany ny Parlemanta no hahitantsika:
Ny isan’ny raharaha niakatra tao amin’ny HCDDED
Firy amin’ireo no niafara tamin’ny:
fameperana amin’ny fepetra mivaingana sy tetiandro
Ho tatitra misy antsipiriany no andrasana ka hahitàna ny sampan-draharaha nahitàna fahadisoana sy ny anaran’ny olona nanao izany.
Raha hanoratra aminay dia tsindrio io ambany io:
Tetibola 2019 ho an'ny daholobe
[17 jona 2018] - Fifidianana filoha: Fantaro Zafimahaleo Rasolofondraosolo(Dama) olom-pirenena
[18 Febroary 2018] - Fanangonantsonia: aza matahotra, rambeso ny zonao”.
[2 Desambra 2011] - Toko telo ho fanorenana ny firenena sy ho an'ny fandrosoana.
Hijery facebook na twitter na blog? Tsindrio ny sary etsy ambany: